मेरो बुढा अस्पातल भएको बेला देवरसँग रात बिताए – Ekathmandunepal
[ ५ बैशाख २०७५, बुधबार २२:०५ ] पुष्टिएकी सेक्सी बहिनीलाई	कथा
[ ५ बैशाख २०७५, बुधबार २२:०१ ] यौन इच्छा भएपछि महिलाले देखाउने ५ ब्यवहार..यस्तो :थाहा पाई राखौ	कथा
[ ५ बैशाख २०७५, बुधबार २१:५७ ] मेरो पहिलो सेक्स अनुभव	कथा
[ ५ बैशाख २०७५, बुधबार २१:५० ] भर्जिन केटीलाई घरमा अर्धनग्न भेट्दा….	कथा
[ ५ बैशाख २०७५, बुधबार २१:२६ ] माइजु त कुकुरसँग मस्ती गर्दै हुनुहुन्थ्यो	कथा
Homeपत्याउनै गाह्रोमेरो बुढा अस्पातल भएको बेला देवरसँग रात बिताए
मेरो बुढा अस्पातल भएको बेला देवरसँग रात बिताए
३ पुष २०७४, सोमबार १६:०१ ekathmandu Nepal पत्याउनै गाह्रो 0
मेरो बुढाको भाइसंग सम्बन्ध त्यस दिन गाँसियो जब मेरो बुढाको बाइक एक्सिडेन्ट भएको थियो। खासमा म त्यो भन्दा पहिले बुढासंग मेरो सम्बन्ध राम्रो थियो। मेरो बुढा रक्सी नै धेरै खाने। सम्झाउँदा नि नटेर्ने। कमाउन नि राम्रो कमाउने, तर रक्सीमा बढी पैसा खर्च गर्थे।। जति गाली गरेनि त्यस्तै हो मेरो बुढो। रक्सी खाएर आएपछि होस नै हुन्थेन। चिक्न भने उसलाई भनेको टाइममा चिक्नै पर्थ्यो। मान्दैन मान्दैन थियो। झन् रक्सी आएर आएको रात त नचिकी हुँदै हुन्थेन। जबरजस्ती गरेर म माथी चढिहाल्थ्यो। त्यसपछि आफुलाई पनि मन लागिहाल्थ्यो। अरु दिन त हल्कापाराले गर्थे। त्यो रक्सी धोकेर आएको दिन यस्तो बेस्सरी चिक्थ्यो कि के भनुम र। मेरो पुति टनटन भएर दुख्थ्यो।
जोडले चिकेकाले भोलिपल्टसम्म पुति दुखेर तनाव हुने। त्यहि माथी आफ्नो पहिले देखि नै पाठेघरको समस्या छ। यस्तो चिकाइले १-२ दिनसम्म ब्लिडिङ समेत हुन्थ्यो। अझ कतै साथीहरुकोमा गएर आएको बेला झन् मस्त धोकेर आउँछन्। हाम्रो छोरा पनि छ। छोरा १७ वर्ष पुगिसक्यो। अहिले ११ मा पढ्दै छ।
त्यो एक्सिडेन्ट भएको दिन पनि ढिला भएको थियो। रातीको १० वजिसकेको थियो घर आइपुग्छु भनेको मान्छे घर आएनन्। मैले पनि कतै रक्सी धोकेर बसे होलान् सोचे। ११ बजेतिर साथीको एक्सीडेन्ट भयो भनेर खबर आयो। बुढा पनि संगै परेछन्। खुट्टामा अलि ठूलो चोट लागेछ। छोरा र म हस्पिटल गयौं। बुढाको भाइ केही बेर अघि पुगिसकेका थिए। राकेशको उमेर ३२ वर्ष पुगिसकेको थियो तर विहे भने भएको छैन। बुढालाई केही दिन हस्पिटलमै राख्नु पर्ने भयो।
राकेशले धेरै हेल्प गर्यो। हस्पिटलबाट घर टाढा पर्ने भएकाले म राकेशको घरमै बस्न थाले। हाम्रो गफगाफ हुन्थ्यो। हस्पिटल धेरैजसो छोरा जान्थ्यो। राकेशले जान्छु भन्दा पनि छोराले घरमा ममी एक्लै हुनुहुन्छ भन्दै आफैजाने भएर मलाई सजिलो पनि भएको थियो। एक हप्ता बित्यो। अझै २ हप्ता राख्नु पर्ने भयो हस्पिटल। राकेश र मेरो गफगाफ हुन्थ्यो। हामी राती अबेर सम्म टिभी हेर्दै गफ गर्दै बस्थ्यौं। आफ्ना भावना एकअर्कालाई साट्दा साट्दै हाम्रो सम्बन्ध कसरी अघि बढ्यो हामीलाई नै थाहा भएन।
एक रात बुढा र छोरालाई हस्पिटलमा खाना पुर्याएर हामी नौ बजे तिर घर फर्क्यौ। उ आफ्नो कोठा तिर लाग्यो । म आफ्नो कोठा तिर छिरे। निन्द्रा भने पटक्कै लागेन । रातको ११ बजिसकेको थियो। म छटपटिन थाले। किचनबाट केही आवाज सुनियो। गएर हेरे। राकेश नै रहेछ। भेस्ट र हाफ पाइन्टमा। के भयो भनेर मैले सोधे। खै किन हो आज एकदम मन छटपट भैरहेको छ भनेर उसले भन्यो। उसले पनि निन्द्रा नलगागेको बतायो। मैले पनि आफुलाई आज त्यस्तै भइरहेको बताए। मैले यस्तो भन्दा भन्दै राकेशले मलाई झ्याप्प अंगालोमा हालेर ‘तिमीलाई एकदम माया गर्छु, अब टाढिएर बस्न सक्छु जस्तो लाग्दैन’ पो भन्यो।
त्यो रात हामी दुवै एकअर्कामा मग्न भयौं। अनि राकेशको ओछ्यानमा पुग्यौ। लुगा खोलेर खाटमा पल्ट्यौ। राकेसले छातीमाथी टाउको अड्याएर मेरो ढुकढुकी सुन्यो। खुसी छेनौ, भनेर राकेशले सोध्यो। खुसी छु भने, हर केही डर लागेको मैले भने। उनले मेरो दुधमा किस गर्यो। ‘ahhhhhhhhhhhhh’ मेरो आवाजले गर्दा उ अझै माथी सर्यो अनि मेरो घाँटीमा चुप्पा खायो। अनि झन् माथी आएर मेरो रातो ओठमा चुप्पा खायो। ‘ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhh’
त्यसपछि मैले झ्याप्प अंगालो हाले। उसले मेरो नग्न शरिरका सारा अंग चुम्न थाल्यो। मेरो घाँटी, आँखा, निधार, मेरो ठूला दुधमा किस गर्न थाल्यो। त्यसको मज्जै छुट्टै थियो। उफ्, उसले मेरो पुति चलायो, अनि आफ्नो औलाले रगड्न थाल्यो।
उसले लाडो मेरो पुतिमा छिरायो। पुतिमा लुत्त छिर्यो। छिर्ने बेला यस्तो मज्जा आयो मैले मेरो दुध मुसार्न थाले। मेरो देवरले मलाई ४५ मिनेटसम्म चिक्यो। राकेशसंगको त्यो चिकामारी बुढासंगको भन्दा निकै मजेदार थियो। पछि बुढाको डिस्चार्ज भयो। तर पनि केही दिन बिराई म राकेशमा जाने गर्छु, उ मेरो अंगप्रत्यङ्ग चुम्दै मलाई स्वर्गको आनन्द दिन्छ। मेरो पुति चिक्छ।
फेरि आइन तिर्सना बुढाथोकी अर्धनग्न भएर फेसबुक लाइभमा डान्स गर्दै। (हेर्नुहोस पुरा भिडियो )
राती बसमा सुतिरहेको बेला उस्ले मेरो तिघ्रामा हात चलाईरहेको रहेछ
मलाई पनि एकदमै योवनको मात चढेको थियो अनि (449)
यी पोजिसनहरुमा सम्भोग गर्दा लामो समय सम्म गर्न… (310)
के खाँदा कोलेस्टेरोल घट्छ २ मिनेट समय निकालेर अवश्य पढौं (220)
मेरो मस्त जवानी हेर्न नसक्नेले टीभी बन्द गर्नुहोस् म… (159)
आईपीएलमा सन्दीप लामिछानेले खेल्ने चान्स बढ्यो (153)
अब जंगलमा पाइने जुकाको मूल्य आकासिने यस्तो छ संकेत,… (133)
माइजु त कुकुरसँग मस्ती गर्दै हुनुहुन्थ्यो (125)
भर्जिन केटीलाई घरमा अर्धनग्न भेट्दा…. (96)
पुष्टिएकी सेक्सी बहिनीलाई
यौन इच्छा भएपछि महिलाले देखाउने ५ ब्यवहार..यस्तो :थाहा पाई राखौ
भर्जिन केटीलाई घरमा अर्धनग्न भेट्दा….
माइजु त कुकुरसँग मस्ती गर्दै हुनुहुन्थ्यो
रत्नपार्कका हिरो मुकुन्दे परे प्रहरी खोरमा
जहाँ दिनदहाडै हुन्छ बलात्कार, यि विकसित भनिएका देशमा पुरुषहरु नै छैनन् सुरक्षीत
रेडबुल पिउनुहुन्छ ? होसियार ! तपाईं गोरुको वीर्य पिउँदै हुनुहुन्छ
अनलाइनमा ठगी गर्ने गिरोह प्रहरी फन्दामा
चुइंगम भनेर ब्वायफ्रेन्डले यौन उत्तेजना बढाउने औषधि खुवाएपछी…
एक कोरियन युवतीको योनीको रौ फालिदि गरेको दृश्य… (5,405)
आबुई… कति ठूलो यो त मेरोमा छिर्दैन होला ?” (3,224)
घरबेटी दाइले जबर्जस्ती मेरो रातो पेन्टी भित्र हात छिराए (3,163)
थाहा पाउनुहोस्, यस्तो योनी हुने महिलाले धेरै यौन… (2,777)
जंगलमा महिलासंग यौन क्रिडा गरिरहेको भिडियो भाइरल… (2,642)
बहिनी भनेर के गर्नु , खाली अगाडि आएर तिघ्रा देखौने ,… (2,530)
एकैदिन सात चोटि ठोक्दा पनि मेरो देवरले मेरो प्यास… (2,458)
दिदी अब त अति भयो यो भाईको भाईलाई अब स्वर्गको बाटो… (2,328)
बाबु अझ भित्रै, भाउजूले काम्दै भनिन्…देवर भाउजुको… (2,297)
मेरो होल नाइट’ ! युवा र युवतीले एकचोटी पढ्नै पर्ने… (2,280)
सामाजिक संजालमा फेरी लिक भयो एक जोडीको आपत्तिजनक… (2,189)
कक्षा १२ मा अध्ययनरत युवातीको गोप्य भिडियो लिक.घरमा… (2,179)
मेरो पहिलो सेक्स अनुभव (2,175)
राजा मलाई कुकुरले गरेको जसरी गर न कस्तो मज्जा आउछ (2,146)
तिर्सना बुढाथोकी अर्को उपर्दो नाङ्गै नुहाउदा नुहाउदै… (1,980)